1.8m UV Inkjet Printer With2Epson XP600 Printheads BUK10,084,978
ခြင်း0အမျိုးအစား(များ) မင်းကြည့်နေသည်: ဈေးနှုန်း : BUK10,084,978/set
ပင်မ > ကြော်ငြာနှင့် ဆိုင်းဘုတ် ကိရိယာ > ပြားပြားရှည်ရှည်ပုံစံရှိသော ပုံနှိပ်စက်နှင့် အထောက > ကြီးမားသော ပုံစံရှိသော ပုံနှိပ်စက် > 1.8m UV Inkjet Printer With2Epson XP600 Printheads
ပို၍ကြီးမားသောပုံနှင့်အခြားမြင်ကွင်းများအား မြင်သည် ( ချဲ့ ခြင်း ဖြင့်)
1.8m UV Inkjet Printer With2Epson XP600 Printheads
|2အရောင်းအဝယ်များ
FOB ဈေးနှုန်း : BUK 10,084,978/set (လျှော့ဈေးအသိပေးစာ) (လက်​ကျန်​ပစ္စည်း)
အရေအတွက်: set(s)	 စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ: MMK BUK10,084,978
ပို့ဆောင်ရန်အလေးချိန်: 588.6lb (267.54kg) ကုန်စည်
0 စုစုပေါင်း သင်၏ခြင်းထဲတွင်, ခြင်းစုစုပေါင်း: BUK
BUK1,067 - 1,111/pc
BUK5,456 - 5,867/parcel
4 မှာယူမှုအတည်ပြု ချက်
3 သင်၏မှာယူမှုအားချိန်ဆပါ (FCL) သင်၏မှာယူမှုအားချိန်ဆပါ (LCL)
အရေအတွက်: တိုင်းပြည်: Afghanistan Albania Algerial Andorra Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Barbados-- Bridgetown Belarus Belgium Benin Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Central African Republic Chad Chile Chinese Taipei Columbia Congo Conoros Islands Costa Rica Cote D Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Denmark Djibouti Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritre Estonia Ethiopia Faroe Islands Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada--St.George Guadeloupe Guatemala Guinea Bissau Guninea Guyana Haiti Holland Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kampuchea Kazakhstan Kenya Kiribati Korea Kosovo Kuwait Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Lithuania Luxembourg MAadagasca MAauritania Macedonia Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Mauritius Mexico Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia New Caledonia New Zealand Nicaragua Nicaragua Niger Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Polynesie Frence Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Russia Rwanda Saint Lucia Samoa Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Somalia South Africa Spain Sri Lanka St Kitts and Nevis Sultan Suriname Swaziland Sweden Switzerland Syria Tajikistan Tanzania Thailand Timor-Leste Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda UK Ukraine United Arab Emirates United States (eastern part ) United States (western part) Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Zambia Zimbabwe
ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်း သို့ ဆီသို့ ဝန်ဆောင်မှု ပို့ဆောင်မှု*
US $75.00 အမေရိကန် ကားဖြင့်ပို့ဆောင်မှု: TNT/DHL/FEDX/UPS ----ကြားခန့်မှန်းချေ < ကာလသက်တမ်းအမျိုးအစား -၃ရက်မှ၆ရက်အတွင်း>
1.၁။ အကယ်၍ကားဖြင့်ပို့ရန်ရွေးပါက ပို့ဆောင်ခသည်အနည်းငယ်ပိုများသော်လည်း သင့်ဆီသို့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ၃ရက်မှ၅ရက်အတွင်းအရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ငွေပေးချေပြီးစောင့်နေရုံသာလိုပါသည်.
2.၂။ အကယ်၍ရေကြောင်းခရီးဖြင့်ပို့စေလိုပါက ပို့ဆောင်ကြေးသည် သက်သာသော်လည်း သင်သည်အကောက်ခွန်ရှင်းတမ်းများပြုရန်အတွက်ဆိပ်ကမ်းသို့သွားရန်လိုပြီး ဆိပ်ကမ်းမှကုန်ပစ္စည်းများအားသင့်အိမ်သို့အရောက်ကိုယ်တိုင်သယ်ဆောင်သွားရပါမည်။ယေဘူယျအားဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရန်လိပ်စာပေါ်မူတည်ပြီး ၁၀ရက်မှရက်၃၀အတွင်းကြာနိုင်ပါသည်.
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ယခုလက်ရှိတွင် ရုရှား,အမေရိကန်,ဘရာဇီးနှင့်မက္ကဆီကိုပါဝင်သောနိုင်ငံခြားကုန်လှောင်ရုံ၎ခုရှိပါသည်။ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုကိုလည်းဥရောပတွင်ဆောက်လုပ်တပ်ဆင်နေပါပြီ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မှာယူမှုအားအနီးဆုံးကုန်လှောင်ရုံမှပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍အနီးရှိကုန်လှောင်ရုံတွင်ပစ္စည်းပြတ်နေပါက တရုတ်မှတိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါမည်.
1) ၁။ အထုတ်ဖြေပြီးနောက်အရည်အသွေးပိုင်းပြဿ နာရှိခဲ့လျှင်.
2) ၂။ ထုတ်ကုန်သည်မှာယူထားသောစာရင်းနှင့်မတူညီကွဲပြားနေသောအခါ.
3) ၃။ ထုတ်ကုန်သည်ပို့ဆောင်ချိန်အတွင်းပြန်ပြင်၍မရနိုင်သောအခါ.
4.အနောက်ဘက်အသင့်အဖွဲ့အစည်း အွန်လိုင်း/အော့ဖ်လိုင်း ငွေပေးချေမှု
1.8m UV Inkjet Printer With Epson XP600 Printheads
Imported LED cold light curing lamp,energy-saving,low-heating, long service life.
X-axis adopts Germany imported gear box, super stable.Y-axis using magenetic sensor positioning, more accurate.
Brand new designed feeding method,more accurate.
Humanized carriage anti-collision design, can protect printheads effectively.
Print head XP600
Print head quantity 2PCS
Printing Speed/ Mode 4PASS 12m²
Print width 1083m
Media type All kinds of indoor and outdoor advertising materials and decoration materials, like: photo paper,PP,canvas,Vinyl,Flex,PVC soft film etc...
Computer configuration WIN7 and above. 64bits; CPU i5 processor and above,8G memory, ASUS motherboard 3.0GHZ disk with SSD 150G, attached disk 1TB
Heating system LED UV water-cooling curing system
Temperature/Humidity 20~30°C, 50~65%
RIP software Maintop/ photoprint(optional)
All kinds of indoor and outdoor advertising materials and decoration materials, like: photo paper,PP,canvas,Vinyl,Flag, Flex Banner, Polyester, Back-Lit Film, Window Film,PVC soft film etc.
ပျမ်းမျှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်:0( )
----- အတွက်အမြင်ရေးပါ 1.8m UV Inkjet Printer With2Epson XP600 Printheads
ဤကုန်ပစ္စည်းအားအသုံးပြု ခြင်းဖြင့် သင်၏အတွေ့အကြုံ အားကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဝေမျှလိုက်ပါ * ဤထုတ်ကုန်အားအသုံးပြု ခြင်းဖြင့်ရှိလာသောအတွေ့အကြုံများအားဖော်ပြပါ,ဘာကြောင့်၎င်းကိုဝယ်ခဲ့လဲဆိုတာနှင့် အခြားအထူးအသုံးပြုချက်များ.
* အတည်ပြု ကုဒ်: ကုဒ်အသစ်အားကြိုးစားကြည့်ပါ
* စီးပွားရေး အီးမေးလ်:
ထုတ်ကုန်ရောက်ရန်ကြာချိန်, ပို့ဆောင်ခ, အခြားအထူးပြုချက်များ, အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းအစရှိသဖြင့် သင်၏မေးမြန်းချက်များအားရိုက်ထည့်ပါ.
သွင်ပြင်လက္ခဏာများ: ၂၀ မိနစ် - အများဆုံး ၂၀၀၀
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ကျော် ဆိပ်ကမ်းပေါင်း ၃၀၀သို့ ပေးပို့ပါသည်
Express ဖြင့်: ၃ရက်မှ၅ရက်လုပ်ငန်းရက်များ
ရေကြောင်းဖြင့် : လုပ်ငန်းရက် ၂၀ မှ ၆၀ ရက်အတွင်း
ပြားပြားရှည်ရှည်ပုံစံရှိသော ထုတ်စက် ကြီးမားသော ပုံစံရှိသော ပုံနှိပ်စက် အလံပြုလုပ်သောစက်